Ngwunye mkpuchi mkpuchi mkpuchi maka mkpuchi mkpuchi | mwepụ roba
Home / Ngwá Ọrụ Na-eme Ngwá Ọrụ / Itinye n'ọkwa mkpuchi mwepụ okpomọkụ
Categories: Ngwá Ọrụ Na-eme Ngwá Ọrụ, itinye n'ọkwa ewepu mwepụ Tags: ịzụta mkpuchi mkpuchi mwepụ, mwepụ mkpuchi, mkpuchi mwepụ kpo oku, mkpuchi wepụ, iwepụ mkpuchi ngwa ngwa, mwepụ mkpuchi mkpuchi, mkpuchi mkpuchi mwepụ ọkụ ọkụ, induction coatings wepụ okpomọkụ, itinye n'ọkwa kpo oku maka iwepu mkpuchi, mwepụ roba
Igwe ihe na-ekpochapu ihe na-ewepu ihe na-ekpo ọkụ
HLQ Ogologo oge mkpuchi mkpuchi mwepụ ọkụ ọkụ bụ nke na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ, eriri dị ogologo na isi ọkụ na-ejide aka. Ike sitere na 30 ruo 60KW, na mmepụta ugboro 20KHz gburugburu, ogologo USB nwere ike ịbụ 20 ma ọ bụ 40m ogologo. HLQ mkpuchi mkpuchi mwepụ ọkụ ọkụ enwere ike iji ya maka kpo oku maka mkpuchi na-ewepu, mwepụ roba, mwepụ agba, ihe nkedo ọla kọpa, brazing tube brazing, ikpo ọkụ, wdg.
Na-arụ ọrụ tiori na acteristics
HLQ igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-agbaso usoro oscillating circuit, na-agbanwe ike dị elu ugboro ugboro na-apụta site na onye na-agbanwe ọkụ na mkpuchi oscillating na isi kpo oku, wee pụta na eriri maka ikpo ọkụ.
Na HLQ mkpuchi mkpuchi mwepụ, ọgbọ nke atọ anyị na-agbanwe ma na-agbanwe teknụzụ nabatara iji ghọta ngbanwe dị nro nke IGBT na nnwere onwe na-agbanwe nke ike na ugboro ole, iji ruo akụkụ ọrụ igwe ọkụ dị egwu.
Ike itinye ọsọ Max 25kw 30kw 60kw
Ogologo okpueze oku 20M 20-40M
mmepụta ugboro 20-50KHz
mmepụta ugbu a 5 ~ 45A 6-54A 12-108A
mmepụta voltaji 70 ~ 520V
ọsọ ọsọ voltaji 380V, 3phases, 50 / 60Hz
Ụdị ọrụ 50%
jụrụ mmiri ≥0.5MPa ≥30L / min
Mmiri mmiri mmiri Ee
Arọ Generator 280KG 316KG 580KG
Ịkụ isi 2.2KG 2.7KG 4.5KG
Size / cm Generator 103L × 750W × 156.6H 103L × 750W × 156.6H 70L × 40W × 103.5H
Ịkụ isi Ф6.5 × 16.5L Ф8 × 18.5L Ф11.8 × 24L
Kedu ntinye mkpuchi mkpuchi | Itinye induction Stripping Work?
mwepụ mkpuchi mkpuchi | Itinye induction Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-eziga ugbu a site na eriri ntinye, nke na-emepụta mpaghara electromagnetic. Ala a na-ebute ike nke gbanwere n'ime ọkụ na kọntaktị na ihe ndị na-eduzi dị ka nchara. A na-eme ka okpomoku dị n'okpuru mkpuchi ahụ, na-eme ka mkpuchi ahụ kpoo ngwa ngwa. Usoro a dabara adaba maka ịgwọ ebe dị larịị ma ọ bụ nke gbagọrọ agbagọ na saịtị ahụ ọ chọghịkwa ịnọ n'otu ụlọ mkpọrọ.
The mwepụ mkpuchi mkpuchisistemụ nke ịkụnye ihe na-emepụta agba, ihe mkpuchi ndị ọzọ, nchara nchara, nje na-egbu mmanụ na mmanụ griiz na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ (ferromagnetic steel) na-agbaji njikọta mmekọrịta n'etiti ihe na mkpụrụ ahịhịa etch resid, ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-achịkwa ma na-achịkwa nke na-ewe obere ume.
HLQ na-eme ka mkpuchi mwepụ mkpuchi gị dị nfe na teknụzụ ọzọ na-agbanwe agbanwe: Ngwaọrụ HLQ na-ewepu ihe mkpuchi gị kachasị sie ike site na nchara na enweghị mkpọtụ ma ọ bụ ihe mkpofu nke abụọ-na-agbadata na nchara.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịchọrọ wanwansi iji dozie isi ọwụwa mwepụ gị, HLQ nwere ihe kachasị mma. Onye oru HLQ nwere ike weghaara anyi ihe nkpuchi anyi banyere ihe ojoo gi ma wepu ihe kachasi ike iwepu mkpuchi na onu ogugu nke ruru 10 ugboro ngwa ngwa karia teknụzụ asọmpi dị ka sandblasting. ! Mgbe ndị ọkachamara HLQ na-ebugharị isi ntinye anyị n'elu igwe, ọ na-emepụta okpomoku zuru oke (nke a na-ahụkarị 300 ruo 400 ogo) iji wepụta ngwa ngwa ọtụtụ mkpuchi si tankị, tankị, pipeline, ụgbọ mmiri na nyiwe ndị dị n'èzí, na-ekwe ka mkpuchi (ruo 1-inch thick) a ga-ewepụ ya na mpempe akwụkwọ.
RPR Okpomọkụ Induction mkpuchi mwepụ
RPR Okpomọkụ Induction mkpuchi mwepụ na-arụ ọrụ site n'ụkpụrụ ntinye. A na-eme ka okpomọkụ dị na mkpụrụ nchara na nkekọ dị na nchara na mkpuchi na-agbaji. Mgbe ahụ mkpuchi ahụ ga-ewepụ kpamkpam na-enweghị disintegrating na kpamkpam site na ndị na-emerụ emerụ, ntụgharị. gbawara mgbasa ozi. Nke a na-eme ka mkpofu na imegharị ihe mkpofu dị mfe ma dịkwa ọnụ ala karịa.
Iji ike oriri kachasị ike ọbụlagodi mkpuchi kacha sie ike ma sie ike nwere ike wepu kpamkpam. Ntinye Okpomọkụ RPR bụ ngwa ngwa karịa ụzọ ndị ọzọ. Usoro ịgbachi nkịtị nke iwepụ mkpuchi pụtara na ndị injinia anyị nwere ike ịrụ ọrụ ehihie na abalị na enweghị mmetọ mkpọtụ.
N'ihi ọtụtụ uru nke usoro kpo oku anyị, anyị enweela ike ịnye ọtụtụ ndị ahịa Alliance ọrụ ha chọrọ. Anyị na ndị ahịa rụkọrọ ọrụ dịka:
Nhazi & ihe onunu
Lọ ahịa na ọrụ nri
Hotels & ile ọbịa
Ọdọ mmiri azụmahịa na aquariums
HLQ's jaw-dropping induction dis-bonding usoro na-ewepu ọtụtụ ụdị mkpuchi, gụnyere:
Chartek na-ekpuchi ọkụ ma ọ bụ ihe mkpuchi ndị ọzọ
Ngwa ngwa ngwa, nke dị jụụ, na-ehicha ihe, na nke dị nchebe
Usoro ngwa ngwa, nchekwa ma dị ọcha maka iwepu mkpuchi ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na nchara.
Fọdụ nwere ike kwuo na ịgbapụ agbapụ bụ ụzọ “ngwangwa na nke ruru unyi” iji nweta ọrụ ahụ, mana n'eziokwu ọ dị ọsọ ọsọ, ọ bụghị ọgbụgba ma ọlị. Ebe ọ bụ na ịgbanye ihe na-ewepụtaghị ihe mkpofu nke abụọ, nhicha dị mfe. Withme mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ibe mkpuchi bụ ihe dị mfe karịa ịmekọrịta mgbasa ozi gbawara na ájá.
N'ọtụtụ ọnọdụ, enwere ike ime ka ọ dị mfe ma ọ bụ kpochapụ ya kpamkpam. Cheedị echiche iwepụ ihe nrụpụta na njigide ihe dị oke ọnụ ma were ihe ndozi snorkel na akwa dobe dochie ya!
Trazụ ahịa ndị ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ na ebe dị nso na ọrụ HLQ na-agbagha n'ihi na ọ bụ usoro dị jụụ nke na-agaghị eme mkpọtụ jọgburu onwe ya nke ga-emebi arụmọrụ nke ndị ọrụ ọzọ ị nwere ike ịrụ ọrụ na ọrụ gị.
Ngwunye anyị na-agbagharị agbagharị enweghị akụkụ ọ bụla na-akpụ akpụ, na-eme ka usoro anyị dị nchebe karịa hydro-ọgbụgba ọkụ ma ọ bụ ihe mkpuchi maka ndị ọrụ gị, ndị ọrụ ngo ndị ọzọ, ndị ahịa na ndị na-agafe agafe.
Ntinye nke RPR na-ewepu agba, ihe mkpuchi, nchara nchara, nje na mmanụ & griiz sitere na eletriki na-eduzi eletriki (nchara, wdg) site na imebi mmekọrịta dị n'etiti ihe a ga-ewepụ yana mkpụrụ na-ejikwa, na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ. - ike oriri nke ume.
The induction chaa chaa
Onye na-etinye ọkụ na RPR na-eziga ụzọ ọzọ site na induction kpo oku, nke na - emepụta oghere eletriki. Igwe magnet a na-ebute oke mmiri dị ka ihe nchara. N'ihi nguzogide nke nchara, mmiri ndị a na-agbanwe ka ọ bụrụ okpomọkụ = ntinye ọkụ. A na-eme ka okpomọkụ dị n'okpuru mkpuchi ahụ, na-ebute ngwa ngwa ma dị ọcha.
RPR Okpomọkụ Induction na-arụ ọrụ site na ụkpụrụ nke itinye n'ọkwa. A na-eme ka okpomọkụ dị na mkpụrụ nchara na nkekọ dị na nchara na mkpuchi na-agbaji. Mgbe ahụ mkpuchi ahụ ga-ewepụ kpamkpam na-enweghị disintegrating na kpamkpam na-efe efe mmadụ, ntụgharị. gbawara mgbasa ozi. Nke a na-eme ka mkpofu na imegharị ihe mkpofu dị mfe ma nwekwa ego ọnụ.
Site n'iji ike ike kacha nta enwere ike wepụ kpamkpam ihe mkpuchi kachasị sie ike ma sie ike. RPR Okpomọkụ Ugbo oku bụ ngwa ngwa karịa ụzọ ndị ọzọ. Usoro ịgbachi nkịtị nke iwepụ mkpuchi pụtara na ndị injinia anyị nwere ike ịrụ ọrụ ehihie na abalị na enweghị mmetọ mkpọtụ.
Usoro RPR dị mma maka iwepu agba, nchara, na mkpuchi ndị ọzọ (roba na-edozi, ihe nchekwa ọkụ, epoxies, wdg. Yana ikike ịchịkwa maka ọrụ ndị a:
• Oriri ike
• Disbonding ọnọdụ okpomọkụ
• Okpomoku ọkụ
• Ọsọ mwepụ
N'ihe banyere ịkekọrịta ohere dị elu, RPR na-anapụta arụmọrụ na-enweghị atụ ma ọ bụ usoro nhọrọ maka ọnụọgụ dị oke ọnụ, nchekwa na gburugburu ebe obibi na-ewepụ ihe ntanetị.
RPR dị mma maka: mmiri, tankị, ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri
RPR Itinye Pipeline mkpuchi mwepụ Ngwa
Obere okpomoku induction hita
brazing kpo oku
6KW na-ekpo ọkụ ntinye aka
Itinye n'ọkwa mmiri kpo oku Ngwa